वर्णन मिडिया ओली सर्वमान्य बन्ने आधार कति बलिया कति कमजोर - वर्णन मिडिया
ओली सर्वमान्य बन्ने आधार कति बलिया कति कमजोर
०८-माघ-२०७६ | ०३:२३:५६ pm
राजनीतिमा शक्ति चाहिन्छ तर जनताको बीचमा लोकप्रिय हुन नैतिकता चाहिन्छ । नैतिकता अनेक परिभाषा होलान् तर आर्थिक शुद्धता गुन सम्झिन सक्ने क्षमता अति महत्व पुर्ण कुरा हो ।
अहिले नेकपामा अति नै शक्तिशाली मानिनु हुने र आज पनि सोही हैसियतमा रहेका प्रधान मन्त्री ओली पक्षमा अहिले हाइकमाण्ड भित्र देखिएका ३ जना प्रमुख व्यक्तिहरु कमजोर देखिएका छन् । विष्णु पौडेल पार्टी माहासचिव, ईश्वर पोखरेल पुर्व पार्टी माहासचिव र रामवाहादुर थापा बादल गृहमन्त्री ।
अरु को कता छन् यहाँ विश्लेषण नगरौ तर यि ३ जना ओलीकै पक्षमा छन् भन्ने कुरा जग जाहेर छ । तर यि तीनै जना नेताहरुको वारेमा बजारमा एउटा हल्ला छ ।
पहिलो बिष्णु पौडेल ।
उनलाई बालुवाटारको ८ आना जग्गाले माथि उठ्न देला जस्तो लाग्दैन । उनी दोषि हुन् वा होइनन् त्यो एउटा पक्ष रह््यो तर उनी वास्तवमा निदोर्ष देखिन सक्ने अवस्था रहेन । जग्गा किन्न पाइन्छ, छोराले कमाएर पनि किनेको हुन सक्छ । त्यो हामीले भन्ने कुरा हो तर आम जनता त्यो मान्न तयार छैनन् । धेरैको भनाई के छ भने उनले त्यो जग्गा कुनै तरिकाले आफ्नो बनाएका हुन् । यो हल्ला जनमानसमा छ । उनको नैतिकता माथि मिडियाको कुनै आफ्नो धारणा छैन किनकी आफ्नो धारणा राख्नु पत्रिककाको धर्म होइन । तर जनता माझ विष्णु पौडेल प्रति त्यो जग्गा अति क्रमण सम्वन्धमा सहभागि भएको दोषारोपण छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नु नेतृत्वका लागि राम्रो काम होइन । सच्चा नेतालाई जनताले पाल्ने हो । गांन्धीले कतै गौथलीको गुँड बनाए ? विपिको कहि दरवार छ ? वास्तवमा राजनेतालाई जनताले पाल्ने हो । नेताहरुले गलत सोंचे सोच्नुहोस , सम्पत्ति कमाउने जग्गा जोड्ने त सामान्य व्यक्तिको काम हो ।
ईश्वर पोखरेलः ओलीको नजिग मानिने अर्का नेता गोकर्णको जग्गाा नविकरणमा दोषि देखिएकाछन् । जुन जग्गा जतिमा कारोवार भयो त्यो भन्द ५० करोड मैले तिर्छु भन्ने अर्को मानिस आइ सकेपछि त्यहाँ गडबडी भएको भन्ने बिषय कुनै पोलीटिकल स्टन्ट रहेन । उनले चाहेर वा नचाहेर पोखरलेको उँचाइ पनि त्यहाँ रहेन जहाँ नेकपा जस्तो २ तिहाइ ल्याएको पार्टीको हाइ कमाण्डमा हुनु पर्दथ्यो ।
रामबहादुर थापाः जो प्रचण्डलाई चटक्क छोडेर ओली पक्षमा आए उनी यता पनि भएनन् उता पनि रहेनन् । प्रचण्ड जसले माओवादीलाई अवतरण गराएर जंगलको परिवेशबाट जहाजमा उड्ने बनायो उसलाई छोडेर अर्कोको साथमा जानु भनेको कस्तो बिषय हो सोच्नु नै परेन । उनीप्रति धेरै विश्वास गर्ने आधार पनि रहेन ।
यस तरिकाले बिश्लेषण गर्दा ओलीको खास व्यक्तिहरु आज कमजोर अवस्थामाछन् ।
त्यसैले जति संभव हुन्छ ओली सर्वमान्य बन्ने प्रयासमा जानु उपयुक्त हुन्छ । हिजो के थियो के भयो भएन अव ओलीले कुनै गुटलाई काखि च्यापेर यो मेरो गुटको र त्यो अर्को खेमाको भन्न जरुरी रहेन । किनकी उहाँका भनिएका खम्वामा धमिरा लागि सकेको छ ।
धमिरालागेका खम्वा ढिलो चाडो फेर्नुपर्छ । नेतृत्व निर्माण भनेको एउटा पद आउने जाने मात्र कुरा होइन । नेतृत्व निर्माण गर्दा त्यो व्यक्ति नैतिकताले माझिएको हुनुपर्छ ।
हजारौभेडाको हौसलाले गर्ने काम भन्दा एउटा सिंहको साहारा हजारौ गुणा उपयोगी हुन्छ । यो संसारमा सूर्य बहुमतले चम्क्एिको होइन र आगो बहुमतले दन्किएको े होइन । दुवैलाई नैतिकताको शक्ति चाहिन्छ सूर्यमा हेलीयम हाइड्रोजनमा परिणत हुन्छ र आगोमा दाउरा वा इन्धन मेटिएर कार्वन बन्नु पर्छ ।
त्यसैले अब प्रधानमन्त्री सर्वमान्य बन्ने पैयास गरेमा त्यसको फाइदा देशले पाउने छ । अभावको बीचमा शत्ताका बिरोधी धेरै हुन्छन् त्यसैले तेश्रो विश्वमा नेताहरुले नैतिकता कै आधारमा उँचाई खोज्ने प्रयास गर्नु पर्छ अख्तियारको आधारमा होइन ।